2 taona 5 volana lasa izay #401 by Colonelwing
Gentelmen ,, hanontany tena ve ianao?
Tsy misy intsony, eto no fomba izany dia tahaka ny izany!
U-2 Spy Fiaramanidina Pilot velona The Edge!
Beale Air Force Base, miorina ao California,
no an-trano ho an'ny U-2. Ity fiaramanidina tamin'ny voalohany natao mba manidina avo-Hauteur tsaina, fanaraha-maso sy ny Reconnaissance misiona nandritra ny Ady Mangatsiaka, mba hanangona ny faharanitan-tsaina amin'ny fahavalo. Ankehitriny, ny U-2S manidina ho fanohanana ny asa fitoriana isan-karazany avy amin'ny tany ady ho tra-boina.
Ny U-2S dia iray fanaovam-panavotana, mpitovo-maotera, avo-Altitude / akaikin'ny toerana sy ny fanaraha-maso fiaramanidina Reconnaissance manome famantarana, sary, sy ny elektronika refiny sy ny fanaovan-tsonia ny faharanitan-tsaina, na MASINT.
Zatra fiaramanidina amin'ny haavo ny 70,000 tongotra, ny U-2 mpanamory fiaramanidina dia tsy maintsy hitafy ny tsindry feno akanjo mitovy amin'ny an'ireo anaovan'ny mpanamory. Ny ambany-Altitude fikirakirana toetra ny fiaramanidina sy ny bisikileta-karazana fitaovana fipetrahana mitaky fanaraha-maso marina inputs nandritra ny fipetrahana; nandroso hisongadina ihany koa voafetra noho ny fiaramanidina maharitra orona sy ny "taildragger" fanahafana. Ny faharoa U-2 mpanamory raha ny tokony ho "Nanenjika" isaky ny fipetrahana ao amin'ny avo-fampisehoana hividy fiara, manampy ny mpanamory amin'ny fanomezana ho an'ny onjam-peo inputs Altitude sy ny fiaingana fampifanarahana. Ireo toetra mitambatra mba hahazoana ny U-2 iray eken'ny besinimaro anaram-boninahitra toy ny sarotra indrindra fiaramanidina any amin'ny tontolo ho manidina.
Raha eo amin'ny asa fitoriana, U-2 mpanamory matetika mahita ny fisehoan-javatra voajanahary antsoina hoe Rakoto tsipika. Tena tsipika manasaraka andro sy ny alina. Misy ihany koa ny antsoina hoe ny "tsipika fotsy" sy ilay "takariva iny faritra." Izany dia noho ny andalana c ny rivo-piainana hiondrika masoandro. Io "Ah hektara" fotoana dia fampahatsiahivana ny fomba tsara tarehy kely isika rehefa skimming ny sisin'ny toerana.
U-2 Spy Fiaramanidina Pilot Prep + ny fiaramanidina Ary Landing
A USAF mpanamory mba manidina ny U-2 Dragon Lady Reconnaissance fiaramanidina nandritra ny Reconnaissance asa fitoriana amin'ny toerana iray fantatra any Azia Atsimo Atsinanana. Video ahitana: Pilot preflight fiomanana; tantsambo sy ny fiaramanidina ny fiaingana; cockpit nandritra nandositra; ny fiaramanidina sy ny fipetrahana; View from hividy fiara.
Fotoana mamorona pejy: 0.174 segondra